Sidee Loo Isticmaalaa Muuqaalka Qarsoon ee Youtube? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 522
Ma ogtahay in YouTube ay ku dhexjirto hab aan qarsoodi ahayn howlaheeda? Haddii aadan wax fikrad ah ka haysan waxa qalabkani macnihiisu yahay iyo waxa loogu talagalay, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso qodobka soo socda oo aan ku sharraxeyno waxa ku saabsan YouTube qarsoodi ahaanshaha iyo sida aan ugu dhaqaajin karno daqiiqado yar gudahood.
Tani waa mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee ay bixiso barnaamijka mobilada YouTube-ka taasna asal ahaan waxay u adeegtaa inaan laga tagin wax raad ah oo ah waxyaabaha aan ku daawanayno madal caan ah oo fiidiyoow ah. Nala joog oo baro sida loo isticmaalo muuqaalkan cajiibka ah.
Waa maxay YouTube qarsoodi la'aan
Youtube ayaa dhawaan soo saartay ikhtiyaarkan cusub ee loogu talagalay barnaamijyadeeda moobilka adeegsadayaashuna daaran karaan oo damin karaan markay doonaan. Habka qarsoodi la'aanta ayaa badanaa u adeegta si looga hortago barxada in ay badbaadiso taariikhda dhammaan fiidiyowyada aan ku daawaneyno barta.
Markaad dhaqaajineyso qaabka qarsoon ee Youtube waxaan sameyn doonnaa Ka ilaali taariikhda fiidiyowga in lagu keydiyo aaladda moobilka in aan soo saari karno. Sidoo kale, ka saar dhammaan habeynta.
Waa maxay tan? Waxaan ka hortageynaa barnaamijka YouTube-ka inuu bilaabo soo jeedi nuxur la mid ah kii aan daawaneynay maalmihii la soo dhaafay on platform. Hadda talooyinka ay sameeyeen YouTube waxay noqon doonaan kuwo guud.
Marka qaabka qarsoodiga ah ee 'YouTube' uu u hawl galo sidoo kale waan iska ilaalin doonnaa daawashada cajaladaha fiidiyowyada kanaallada aan ka tirsan nahay. Tani waxay dhacdaa maxaa yeelay Diiwaangelinta, Sanduuqa sanduuqa iyo tabta maktabadda sidoo kale waa la naafoobay markii la shaqeynayo muuqaalkan.
Tallaabooyinka lagu kicinaayo hab aan qarsoodi ahayn
Si aad u wanaagsan. Hadda oo aan ognahay waxa loola jeedo habka qarsoodiga iyo waxa loogu talagalay, waxaan ku baran doonnaa habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee loo hawlgeliyo aaladdan xiisaha badan taas oo ku darsatay YouTube barnaamijkeeda moobilka.
Waxa ugu horreeya ee la caddeeyo waa taas Muuqaalkan waxaa kaliya loogu talagalay barnaamijka moobiilka, taasi waa in la yiraahdo ma awoodi doonno inaan ka shaqeyno nooca desktop-ka. Waa kuwan tallaabooyinka la raacayo:
dhagsii ku saabsan astaanta sawirkaaga astaanta
Si toos ah ayaad u aadi doontaa liiska koontada. Halkaas waxaad ka heli doontaa fursado kala duwan oo ah Qalabaynta.
Hadda waa inaad gujisaa ikhtiyaarka "Daar hab qarsoodi la'aan"
Sida loo demiyo hab qarsoodi ah
Miyaad ku aragtay wax aad u fudud in la kiciyo hab qarsoodi la'aan? Tani waa sida ugu fudud uguna dhakhsaha badan ee ay noqon doonto in la joojiyo qalabkan ka socota mobilka. Halkan waxaan ku sharaxeynaa mid kasta oo ka mid ah talaabooyinka la raacayo:
Furan codsiga Youtube ka mobilkaaga
Waxaad ogaan doontaa in sawirkaaga muuqaalka uusan mar dambe ka muuqan shaashadda. Meeshiisa waxaa ku yaal astaanta astaan ​​la'aan.
Guji astaantaas oo xulo "Jooji habka qarsoon"
Taasi waa sida ugu dhakhsaha badan ee aad uga bixi lahayd habka qarsoodi Oo hadda codsigu wuxuu bilaabi doonaa inuu kaydiyo dhammaan taariikhda fiidiyowyada ee aad ka daawaneyso barnaamijka moobiilka.
1 Waa maxay YouTube qarsoodi la'aan
2 Tallaabooyinka lagu kicinaayo hab aan qarsoodi ahayn
3 Sida loo demiyo hab qarsoodi ah